Liiska Hubinta Emailka ee Ciidaha
5 Liistada Hubinta Fasaxa Suuqgeynta Emailka
Monday, August 20, 2012 Sabtida, Oktoobar 25, 2014 Macbadka Lavon
Waa Dayr oo macnaheedu yahay ku soo noqoshada dugsigu si xawli ah ayuu ku socdaa ardayduna waxay ku soo laabanayaan fasalka. Si kastaba ha noqotee,
Waqtiga. La soco in kastoo ay tahay bisha Ogosto, haddana dhowr qof ayaa durba bilaabay inay eegaan fikradaha hadiyadda. Haddii ay ku helaan qiimaha saxda ah, way sii socdaan oo waxay iibsadaan inay ciyaarta ka horreeyaan. Meeleynta emaylkaaga u dir dhagaystayaashaas iyo emayllada farsamada si aad ugu qabsatid kuwa wax iibsanaya. Dabcan, qaar ka mid ah taariikhaha waaweyn ee aad rabto inaad u diyaar garowdo waa Black Friday iyo Cyber ​​Monday, laakiin waa inaad qiimo u siisaa macaamiishaada inta lagu jiro xilliga fasaxa.
Tusaalooyinka Fasaxa. Qiyaasaha ciidaha ayaa ah mid ka mid ah waqtiyada inta badan e-suuqleyda ay ka bixi karaan sanduuqa oo ay ku dari karaan ciil yar oo fasax ah astaamahooda. Hal-abuurka dheeraadka ah waxay u badan tahay inuu ku dhiirrigaliyo macaamiisha inay gujiyaan oo wax iibsadaan.
Qiimaha iyo Gaarka ah. U dir xasuusiyeyaashaada macaamiisha maadaama ciidaha ay bilaabanayaan inay isku soo dhowaadaan. Ku dar rasiidh ama khaas u ah hadiyadaha suuragalka ah xubnaha qoyska, asxaabta, iyo xitaa macallimiinta carruurta. Macaamiisha ayaa qadarin doona inaad shaqada u qabatay iyaga oo aad siisay fikrado.
Moobaylka. Waxaa jiray kor u kac ballaaran oo ku saabsan tirada dadka wax ku iibsaneysa aaladaha moobaylkooda xilliyada ciidaha sannadkan. Sannadkan, waa muhiim in bartaada internetka lagu hagaajiyo mobilka. Waxaad dooneysaa inaad hubiso inay u fududahay macaamiisha inay maraan oo isticmaalaan. Haddii kale, way baxayaan oo waxay helayaan qof la tartama oo uu ka beddelo.
Hel Bulsho. Waxaan rajeyneynaa inaad horeyba ugu soo dartay xiriiriyeyaasha bulshada e-mailkaaga. Si kastaba ha noqotee, xilliyada ciidaha, xitaa waa lagama maarmaan in lagu daro kuwan oo la tuso! Pinterest runtii way kacday sanadkan dad badan ayaa u jihaystay dhankaas. Haddii shirkaddaadu joogitaan ku leedahay halkaas, waxaad u baahan kartaa inaad toos ugu dirto macaamiishaada boggaaga si ay u arkaan alaab muuqaal ahaan iyo inay wax iibsadaan.
Kuwani waa xoogaa tilmaamo ah oo lagu bilaabayo hirgalinta qorshaynta emaylkaaga ciida. Maxay yihiin talooyin kale oo aad ka maqashay oo ka fikiraya inaad ku darto ololayaasha emaylkaaga ciida?
Tags: heshiisyofasaxaliiska hubinta fasaxaSuuqgeynta Mobilada iyo MashiinkaMedia Social Suuqkhaas ahhabyaaladawaqtiga
Macbadka Lavon waa Khabiirka Warbaahinta Digital ee BLASTmedia, Dejinta qorshayaasha isgaarsiinta ee macaamiisha ganacsi iyo ganacsi ee tilmaamaya yoolalka, xeeladaha, iyo tabaha.
Nooca Kaamil ahaanta iyo Xawaaraha Mawduuca
Dhibcaha Klout Dib Ayaa Loo Soo Celiyay… waana jeclahay!
Aug 20, 2012 at 10: 14 AM
Haa-oh… ma la joogaa xilligii la bilaabi lahaa qorshaynta? 🙂